I-Chile iceba ukuphelisa izityalo zayo zamalahle | Ukuhlaziywa okuluhlaza
I-Chile iceba ukucima izityalo zayo zamalahle
Ukuba abezopolitiko bayavuma, iChile ithatha inyathelo eliphambili kuyo Umgaqo-nkqubo ohlaziyekayo. Ilizwe laseChile lifuna ukwenza decarbonize uqoqosho lwalo ngo-2050.
Ngapha koko, iChile icebise ukuba ingaqali ukwenziwa kwezityalo ezitsha ezisebenza ngamalahle, ezingenazo iinkqubo zokubamba kunye ukugcinwa kwekhabhoni okanye ubuchwepheshe obulinganayo. Ukongeza, kubandakanya ukuvalwa okucwangcisiweyo kwezixhobo zolu hlobo ezikhoyo ngoku.
Isigqibo senziwe ziinkampani zombane ezibaluleke kakhulu importantes yelizwe, njenge-AES, Colbun, Enel no-Engie ngokuvumelana norhulumente okhokelwa nguMichelle Bachelet.
"Silindele ukuzibophelela kwethu kwi Isivumelwano saseParis kwaye enkosi ngentsebenziswano yeenkampani ezivelisa imveliso, iChile iya kuba nophuhliso lwedarbonised. Asizukuphinda sakhe ezinye izityalo ezisebenzisa umbane ngamalahle, kwaye kancinci kancinci sizakuvala sizitshintshe ezo zikhona, "umongameli wathumela umyalezo malunga nale nkqubo, ebeka iChile kwindawo ephambili kwiinzame ezenziwayo eLatin America ukulwa notshintsho lwemozulu. (into eveliswa ngamalahle, phakathi kwezinye iigesi zegreenhouse).
1 Ukuhlaziywa namhlanje
1.1 Ingeniso engakumbi
Okwangoku, i-40% yombane waseChile uveliswa kwizityalo zombane ezibonelelwa ngamalahle, nto leyo eyenza lo mthombo ube ngowona mthombo uphambili wokuveliswa kombane elizweni. Nangona kunjalo, utshintsho lwamandla olwamkelayo luhambelana nenkqubela phambili ebalulekileyo Iitekhnoloji ezihlaziyekayo zinazo elizweni:
Izinto ezihlaziyiweyo ukusukela ngeyoKwindla ngo-2014 zangqinelana ne-7% yetotrix iyonke, ephindaphindwe kabini ngo-Matshi 2017. Eyona idityanisiweyo ngamandla elanga, athi ngokweKhomishini yezaMandla kaZwelonke ngoFebruwari walo nyaka ama-76% eeprojekthi ahambelana iipaneli zelanga ze-photovoltaicKe, kwiNkqubo yoDibaniso oluPhakathi i-5% ivela kolu hlobo lwamandla. Kukho iiprojekthi zomoya kunye ne-hydraulic.
Ukongeza ekuzinzeni ngakumbi, izinto ezinokuhlaziywa zinenzuzo enkulu, okanye iingxelo ezininzi ngefuthe lezoqoqosho zithi: LIsityalo i-El Romero Solar photovoltaic, sigunyazisiwe kwaye sixhunyiwe kwigridi kwi-2016, ityhila ukuba ngexesha lobomi bayo obuluncedo, obuqikelelwa kwiminyaka engama-35, izakufaka igalelo kwi-316 yezigidi zeedola kwiGross Domestic Product (GDP), “iphindwe kabini kunesityalo esilinganayo samalahle.
I-El Romero Solar, ene-246 MWp, esona sityalo sikhulu se-photovoltaic eLatin America xa yayiqala ukusebenza
Ngokuka-Mphathiswa Wezamandla wase-Chile, u-Andrés Rebolledo “Sinezimo ezizodwa zokuphuhliswa kwamandla ahlaziyekayo. Sizibekele injongo yokuba ngo-2050 okungenani 70% yematriki isekwe kuzo, kwaye sinokufikelela kuma-90% ”.
Las iinkampani zombane Kubonakala ngathi zihambelana norhulumente. Oku kuchazwe kwingxelo edityanelweyo yi-Ofisi yoMphathiswa wezaMandla kunye noMbutho wabavelisi bakagesi: "Siyabulela kunciphiso olukhulu lwendleko kunye nobuninzi bobuchwephesha bokuvelisa obuvuselelweyo obufakwe kwimatrix yethu, ishishini lokuvelisa umbane libonisa ikamva elihlaziyekayo eliqhubekayo" .
Isigqibo seChile sihambelana nenkqubela phambili yolawulo lwedizoni kwaye ibonisa umendo omkhulu wokuvuselelwa kwamandla avulekileyo enkosi. izibonelelo zayo”, Watsho u-Enrique Maurtua Konstantinidis, umlawuli woTshintsho lweMozulu eFundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Yiyo loo nto urhulumente ebonakalise uguquko olunzulu oluphunyezwe kule minyaka idlulileyo ephendula kwimigaqo-nkqubo yoluntu eyilelwe ngokudibeneyo nabadlali bakarhulumente nabucala, eqinisekisa ukuba "icandelo lezamandla likhokelela kutyalo-mali kwaye likwazile ukunciphisa kakhulu amaxabiso aboIngqwalasela yomtsalane kumashishini amatsha kwaye inezinga eliphezulu lokhuphiswano ”.
UMlawuli oLawulayo weFoto yaseChile, uMyriam Gómez, uthe "ngaphandle kwamathandabuzo, ukuba nematriki egxile kumandla ahlaziyekayo kunye nokusebenzisa izibonelelo zendalo ngokufanelekileyo, sithatha amanyathelo azinzileyo kwikamva, zezona zinto ziphambili kumfanekiso welizwe lethu. Ngapha koko, ngokwengxelo ye-2017 yengcebiso yamazwe aphesheya u-Ernst kunye noLutsha, i-Index yeLizwe yokuHlalwa kwaMandla aVuselelekayo, isikhundla selizwe kwindawo yesithandathu kwihlabathi liphela phakathi kwezizwe ezinamathuba amahle kuphuhliso lwe-NCRE ”.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Umoya ovuselelekayo » I-Chile iceba ukucima izityalo zayo zamalahle
Amakhaya aseAlcalá azakuxhamla kumandla ahlaziyekayo